Portugal vs Germany Euro 2021 Amụma & Tipsgba Atụmatụ Atụmatụ Review Review - latabernasanlucar.com
By Sara GrayJune 17, 2021No Comments
Portugal ga-ezute Germany na Allianz Arena na Munich na June 19 2021 na 6PM Central European Summer Time.
Na egwuregwu anyị maka egwuregwu Portugal na Germany t Euro 2021 anyị ga-enye gị ụfọdụ amụma, nsogbu d e ịkụ nzọ maka egwuregwu a siri ike.
Ya only, na-enweghịn’ihu ado, ka ina…
Formdị Portugal, Ebu amụma na usoro
Abịa na Euro 2020, Portugal enweghị mmeri na 2021, ha gbara 5, 5 merie 3 adorable see egwuregwu abụọ.
Portugal bụkwa ndị na-agbachitere agbachitere mgbe ha meriri 2016 European Championship. Portugal meriri Nations League na 2019 ma FIFA nọn’ọnọdụ nke 5 ugbu a.
Portugal dị mma na egwuregwu mmeghe ha na Euro 2021 megide Hungary miniature merie oke 3-0.
Pọtugal na-ebukarịn’ụdị 4-3-3 isi onye isi ọrụ Fernando Santos na-arụ ọrụ dabere na mmegide ọ na-eche ihu. Ọ bụrụ d e Portugal na-egwu otu egwuregwu siri ike nke na-agbanye, mgbe ahụ, 2 nke 3 ndị na-etiti etiti ga-abụ ndị na-agbachitere ndị na-eche nche mgbe onye nke ọzọ na-eme egwuregwu bụ onye na-agagharị agagharị na-agagharị agagharị na usoro ahụ na-ele anya dị ka 4-2-3-1.
Ọ bụrụ na Portugal na-eche otu ndị na-ahọrọ ịnọdụ ala ma na-agbachitere ọnụ mgbe ahụ, a ga-edozi midfield iji mebie nchebe ahụ. Portugal ga – agbakọrịrị onye na – agbachitere 1 d e – agbachitere bọọlụ, igbe 1 ka ọ gbaa ọkpọ na midfielder na onye na – alụ ọgụ.
Otun’ime azụ zuru ezu, na-abụkarị Raphael Guerreron’aka ekpe, na-agbanye elu mgbe ikike zuru oke na-echekarị na ọ ga-agbachitere un ma mepụta azụ atọ na etiti. Ọ bụrụ na ha na-eche ihu na-agbachitere otu ndị na-agbachitere fullback na-emekwa ka ọ dị elu.
Pa jikọrọ azụ that a họọrọ ịbụ Ruben Dias dị afọ 24 na Pepe nwere ahụmịhe, Raphael Guerrero bụ onye chọrọ ịwakpo ọgụ zuru oke ebe Cancelo bụ onye na-achọghị mgbanwe zuru oke.
Ekwesịrị ịwepụ Cancelon’òtù ahụn’ihi na ọ butere Covid ma dochie ya Diogo Dalot. Semedo bụ nhọrọ mbụ ugbu an’ọnọdụ Cancelo
Danilo Periera bụ onye na-ahọrọ onye na-agbachitere nchebe d e ọ na-ejikọkarị ya na Ruben Neves ma ọ bụ William Carvalho bụ onye nwere ike ịmepụta ogologo oge dị egwu.
Anyị na-atụ anya ka Danilo na Carvalho nọrọ ọdụ miri emi miniature mepụta isi abụọ dị na egwuregwu an’etiti Portugal na Germany. Ọ bụrụ na Portugal ekwenye, enwere ike ibuli Carvalho elu ma bụrụ onye Renato Sanches nwere ike dochie anya ya nke nwere ike isonyere ọgụ ngwa ngwa website Id etiti.
Bruno Fernandes ga-ebidon’ihu ha dịka onye na-egwu egwu d e etiti atọ nwere Ronaldo dịka etiti na-agan’ihu, Jotan’aka ekpe d e Bernardo Silvan’aka nri.
Ferandes, Ronaldo, Jota na Bernando Silva na-enwerịta ọnọdụ dị iche iche ma nwee nnukwu mmiri ma ị nwere ike ịtụ anya na ha na Germany ga-eme nke a.
Pọtugalụ amụma ndị kwụ ọtọ
Patricio, Guerrero, Pepe, R. Dias, Semedo, Danilo Perriera, Carvalho, Bruno fernandes, Jota, Ronaldo, B.Silva
Formdị Germany, akara akara na usoro
Mgbe afọ iri na ise dị ka onye isi nchịkwa nke Germany, Joachim Low ga-agba arụkwaghịm mgbe Euro 2021. O nyeere Germany aka iru nke ikpeazụ nke Euro 2008, ebe nke atọ na 2010 World Cup, ọkara nke ikpeazụ na Euro 2012 wee nye aka ha meriri na iko mba uwa nke 2014 sochiri ebe nke ano na Euro 2016.
Kemgbe ahụ, Germany ahụla ezigbo ụdị. Ha si na 2018 World Cup pụta t even ọkwa otu. Nke a bụ oge izizi mba Jamanị ekweghị gafee ọgbakọ otu iko mba ụwa.
Ọgbọ ọlaedo emeela agadi na ọtụtụ ndị egwuregwu dịka Lahm, Klose, Schweinsteiger, Khedira, Boateng na Goetze lara ezumike nká na ndị otu egwuregwu ọhụụ enweghị ike idozi ma dochie ha.
Low agbanweela ndị na-egwu un t usoro un mgbe niile miniature kpebie ịhapụ arụkwaghịmn’ihi ọdịda ya inyere German aka iru ebube mbụ ya.
Germanydị Germany na 2021 agwakọtara. Tupu Euro 2020 ha gbara egwuregwu ise, merie 3, visit two adorable tụpụ 2-1 na North Macedonia.
Ọ bụ ezie na Germany meriri 1-0 na France, ndị German egwu nke ọma, na-eke ọtụtụ ohere, ọkachasị d e ọkara nke abụọ.
Ntughari nke Mats Hummels na Euro 2021 ewetala ntakịrị nkwụsi ike na nchekwa, ọnọdụ nke Germany gbalịsiri ike ka a ga-anwale ọtụtụ ndị egwuregwun’ọkwá ndị a.
Ebe kachasị amasị etiti dị ugbu a ka Rudiger na Hummels ma ọ bụrụ t a na-egwu two etiti azụ ebe Ginter na-agbakwunye ma ọ bụrụ na Germany na-arapara na usoro chọrọ 3 etiti azụ.
Website t nhazi 4-2-3-1 Die Manschafft agbanweela na nhazi 3-4-3 t even egwuregwu ndị a na-adịbeghị anya.
Rudiger, Hummels na Ginter yiri ka ha bụ ndị mbụ na-ahọrọ ndị na-agbachitere etiti, Kimmich jigidere ebe ya dị ka onye nwere ikike nku aka nri yana ọgụ ọ na-awakpo website Id nku abụwo ihe ịtụnanya mana Could nwere ike ịmaliten’ọnọdụ Ginter
Anyị anaghị atụ anya na Hummels ga-adan’agbanyeghị agbanyeghị ebumnuche nke aka yan’ihi na ọ ka na-emechi ụzọ dị iche iche iji gbochie Mbappe dị obere na ngwa ngwa ị nweta akara na ịmepụta ohere ka egwuregwu ahụ na-agan’ihu.
Anyị na-atụ anya na Germany ga-ebuli elu na ike May ibu bọọlụ website t ịgbachitere nwere ike ịpụta na ọ na-ejide Ginter.
Toni Kroos yiri ka ọ bụ isi na midfield mgbe un t Gundogan nwere onye un t Manchester City ma ọ bụ Leon Goretzka nwere oge.
Goretzka enwetaghị egwuregwu ahụ megide Francen’ihi mmerụ ahụ, o yighị ka ọ ga-amalite megide Portugal.
Gosens magburu onwe un megide France ma that a ga-atụ anya na ọ ga-amalite dịka nku aka ekpe.
Toni Kroos na Gundogan ga-amalite na midfieldn’ihi ejighịn’aka na mmerụ Goretzka gbara. Enweghị nhọrọ ndị ọzọ siri ike d e ahụmahụ nwere ike ịbụ nsogbu nye Germany d e egwuregwu a. Nsogbu a nwekwara ike ifu ha nnukwu ka asọmpi a na-agan’ihu mana enwere ike daban’ọnọdụ a.
Germany enweghi ezigbo oti egwu. Gnabry na-amalitekarị n’ọnọdụ a, Timo Werner na-agbanyekarị n’ọnọdụ a mana ha anaghị agwụcha. Nke a doro anya na egwuregwu ha megide France ebe e kere ọtụtụ ohere dị ịtụnanya na-enweghị ịtụgharị.
N’ihu 3 ga-adị mmiri mmiri ma anyị na-atụ anya Muller, Havertz na Gnabry. Anyị na slotfreespin kwenyere na enwere ike na Timo Werner nwere ike ịmalite n’ọnọdụ Gnabry.
Germany Mara amụma akara
Neur, Rudiger, Hummels, Ginter, Gosens, Kroos, Gundogan, Kimmich, Havertz, Gnabry, Muller
Portgual na Germany Euro 2021 Amụma
Nke a ga-abụ egwuregwu siri ike ịkọ. Akụkọ dị n’akụkụ Germany n’agbanyeghị. N’ime egwuregwu 5 gara aga nke Portugal na Germany chere ihu megide ibe ha Germany meriri na nzukọ 4 gara aga ebe Portugal meriri otu ugboro, na Euro 2000.
Ọ dịghị otu ga-anọdụ ala yabụ ebe a ga-enwe ọtụtụ ọrụ.
Midfield bụ ebe ihe that a ga-emen’echiche anyị. Ndị German ga-anwa ịpịgharị elu ahụ mgbe Portugal ga-anwa ịgbatị egwuregwu ahụ na ọgụ website t mbara.
Dabere na ụdị adịghị mma nke Germany na ọsọ ruo Euro 2021 anyị na-ebu amụma na Portugal ga-emeri 2-1 mana dịka anyị kwuru na mbụ, egwuregwu a siri ike ịkọ.
Portgual na Germany Euro 2020 Nsogbu
Ndị na-ere akwụkwọ na-enye nsogbu ndị that a maka asọmpi Portugal na Germany t Euro 2021:
Obodo Germany 2525Draw 3.35Portugal 3.25
Website t nsogbu ndị a, anyị nwere ike ịhụ nke ọma na ndị na-ede akwụkwọ na-akwado Germany na egwuregwu an’etiti Portugal na Germany t Euro 2020.
Portugal na Germany Euro 2021 Atụmatụ ịkụ nzọ
Ọ bụrụ na ị gụọ akụkọ anyị gbasara usoro ịkụ nzọ bọl d e egwuregwu ịkụ nzọ bọl, ị ga-amata Portugal na Germany bụ egwuregwu zuru oke iji tinye nzọ na Euro 2020.
Ihe kpatara nke a dị mfe, nsogbu ndị otu ahụ dịn’elu 2.0 na ọ ga-abụ egwuregwu asọmpi.
Nke a pụtara na ị nwere ike ị nweta self gị okpukpu atọ website t ịkụ nzọ d e Portugal ma ọ bụ dọta ma rịa self gị okpukpu abụọ ma ọ bụrụ na ị banye na Germany.
N’ikwu ya ebe that a bụ ụfọdụ ndụmọdụ ịkụ nzọ maka egwuregwu Portugal d e Germany na otu F nke Euro 2021:
Tinye otu nzọ na Portugal iji merie na otu nzọ (nke hà nha anya) na Germany iji merie. N’okwu a ị ga – efunahụ self service gị naanị ma ọ bụrụ d e enwere eserese mana ọ ga – eme na egwuregwu dị oke egwu.
Yabụ na ihe ị na-eme bụ ị kewaa ego gị maka egwuregwu ahụ. Ka anyị kwuo na ị nwere mmefu self nke $200 maka egwuregwu a. Place na-etinye otu nzọ nke $100 t Portugal t $100 ọzọ na Germany.
Ọ bụrụ na Portugal merie pasent Uru gị ga-abụ 125 percentn’ihi na Uru gị ga-abụ 5 325- $200 = $125.
Ọ bụrụ na Germany merie ị ga-ejedebe na 12.5percent uru ($225- $200 = 25. 25 bụ 12.5percent nke 200)
TeamOddsBet ỌnụegoWinProfitpercent Portugal3.25 $100 $32562.50percent Germany2.25 $100 $22512.50percent